Uma ufuna ukuphatha umndeni wakho noma izivakashi ngesidlo sakusihlwa esimnandi, ama-burgers avela ku-bream azosiza. Ziphunga kakhulu futhi zithenda, futhi uma ufaka ukugxila kwemifino, uzothola isidlo sokuqala.
I-bream iyinhlanzi yokudla, ngakho-ke ifanele ngisho nezingane ezincane. Icebile amaprotheni wesilwane, ewusizo emzimbeni womuntu. Ngaphezu kwalokho, izinhlanzi ezimhlophe zibhekwa njenge-antioxidant.
Cutlets kusuka bream eKiev
Isidlo esinomsoco nesinomsoco singalungiswa kusuka ezinhlanzi ezimhlophe. Ama-cutlets avela ku-bream ngokusho iresiphi (ngesithombe) ngaphandle kwesinkwa kulula ukupheka, ukumangaza izivakashi. Ukuze ulungiselele, udinga:
Izibopho zenkomo - 800 amagremu.
Butter - 150 gr. (Kungenziwa esikhundleni segargarine).
Amabhakede - i-100 gr.
Izinkukhu zezinkukhu - 1 pc.
Umfula (noma yikuphi) - 2 tbsp. L.
Usawoti, izinongo - ukunambitha.
Amafutha omifino - 400 ml.
Indlela yokupheka izinyamazane ezivela ku-bream:
Inhlanzi yezinhlanzi ihanjiswa esimweni sezinyosi, ngokusebenzisa i-blender noma i-grinder yenyama. Engeza usawoti nezinongo ukunambitha.
Sika ibhotela emagumbini amancane.
Kusukela ekugxotsheni ukwakha amaqebelengwane aphansi. Phakathi nendawo ubeke ucezu lwebhotela uphinde umboze emaphethelweni, unike umumo we-cutlets.
Etafuleni eliphambene uthele ama-biscuits. I-cutlet ngayinye igonywe ngobumnene, bese iqanda. Dunk ngokuphelele ku-crackers.
Esikhathini sokudoba okujulile uthele amafutha futhi gazinga ama-cutlets kuze kube ngumthunzi wegolide we-crackers.
Ngaphambi kokukhonza, kunconywa ukuphuza isidlo ngebhotela elifudumele. Ukuhlobisa kufanelekile imifino, imifino kanye namazambane abilisiwe.
I-Cutlets kusuka ku-bream (iresiphi ngesithombe)
Ukwengeza isinkwa esimhlophe kwenza i-mincemeat elula futhi ithenda ngaphezulu. Ama-cutlets avela ku-bream ayama-airy futhi ancibilike emlonyeni. Imikhiqizo edingekayo yokupheka:
I-white fish fillet - 500 gr.
Anyanisi - 1 ikhanda elikhulu.
Isisindo - 100 gr.
I-Carrot - 1 enkulu.
Imifino iyiqembu elincane.
Amafutha omifino - 100 ml.
Amabhakede - 50 gr.
Ukupheka, ungasebenzisa ngisho nezinhlanzi ezincane, kulokhu kumele zihlukaniswe kahle, zihlukanise namathambo.
Uma kunesidingo, qeda i-fillet, hlambulula.
Anyanisi kanye izaqathe ikhasi. Sika zibe tincetu ezincane.
I-Baton ingene emanzini imizuzu embalwa.
I-fish fillet nge izaqathe nama-anyanisi ukuze kudlule i-grinder yenyama, ugaye nge-blender noma usike kahle ngommese.
Hlanganisa i-forcemeat ngesinkwa, engeza iqanda, usawoti kanye nezinongo.
Yakha i-cutlet enhle bese uyilahla ngezinkwa zokudla.
Fry inqwaba yamafutha yemifino kuze kube yilapho isilungele futhi senze i-golden crust.
I-Cutlets igqoke ithawula leshidi ukuze i-oile ngokweqile igxile. Ngaphambi kokukhonza, uhlobisa isitsha nge amakhambi aqoshiwe.
Kusukela ezinhlanzi ezimbiwe, kutholakala izitsha ezinomsoco namanzi. Bangakhonza ngesidlo sakusihlwa, isidlo sakusihlwa noma etafuleni lokugubha. Ukupheka ku-oven burger cutlets kukhona isidlo sokudla futhi kuhlangene ngokuphelele nemifino fresh.
Izithako ezidingekayo zokulungiselela:
Inhlanzi yenkomo - 500 gr.
Anyanisi - amakhanda amabili.
I-egg - ama-2 ama-pcs. Kubiza okulinganiselwe.
Izaqathe - 1 pc.
Ukuhlanza - ukunambitha.
Ngokuthakazelisayo, inhlanzi encane ingasetshenziselwa ngokuphelele, kanye namathambo, isuse kuphela ikhanda, umsila kanye namakilini. Incazelo yenqubo yokupheka izikhwama ezivela ku-bream kanye ne-recipe ngezithombe ngesinyathelo ngesinyathelo kuzosiza ngisho ne-novice ukubhekana nalokhu:
Amaphilisi okudoba adluliselwa nge-grinder yenyama noma emhlabathini nge-blender.
Ama-karoti no-anyanisi nazo futhi zenezelwe emhlabathini.
Amaqanda ashaywa. Bese usungenisa ekugxotsheni.
Engeza usawoti, izinongo kanye nemifino eqoshiwe.
Inyama encane iyasuswa okwesikhashana esiqandisini.
Gcoba itreyi ngamafutha amancane.
I-meatballs encane ifakwe emanzini okugcoba. Bese usakaze emgqeni wokubhaka ibanga elincane.
Bhaka kuhhavini elushisayo ngaphambi kuka-220 degrees.
Ama-cuttinglets anjalo angathathwa noma agwetshwe. Khonza isidlo ngezinhlanzi ezishisayo, ufafaze ngamakhambi kanye namakhambi.
Indlela yokukhetha inhlanzi ye-cutlets
Ukugxila kufanele kube okunethezeka futhi okumnandi. Ukuze wenze lokhu, khetha izinhlanzi ezintsha, kokubili ulwandle nomfula. Izinhlobo ezimhlophe zigcwele i-calcium, zibhekwa njengokudla. Inhlanzi enjalo, njenge-bream, inamanzi ngokwanele futhi ayidingi ukungezwa kwamafutha angcolile.
Kungcono ukhethe abantu abakhulu, ngakho-ke ama-cutlets angcono kakhulu. Uma inhlanzi encane - susa ikhanda, umsila kanye nezibilini bese uyigaya kanye namathambo. Ngeke bazizwe edilini elilungiselelwe.
Ukusika ama-juiceer kunconywa, kunconywa ukuthi wengeze inyama eningi egayiwe, kanye neklabishi noma izaqathe. Futhi uhlanganise nezinhlanzi ngamabele, njengama-mango, noma isinkwa esifakwe emanzini noma ebisi.
Inhlanganisela ezithakazelisayo izosuswa inyama ye-bream, ixutshwe no- anyanisi othosiwe noma i-apula egayiwe. Ama-cuttinglets anjalo ajwayelekile futhi ayinambitha.
Inyama encane ephuma ezinhlobonhlobo zezinhlanzi imhlophe kakhulu, ngakho-ke abapheki batusa ukusebenzisa ukudlala. Ufanisa suhariki, ilayisi noma ufulawa wekolweni.
Ama-cutlets avela ku-bream - isidlo esihle senhlanzi sekuseni noma itafula lokugubha. Ihlanganiswa nesaladi yemifino ehlanzekile, kanye namazambane abilisiwe abilisiwe.
Ukupheka kanjani isibindi sezinkomo ngokufanele?
I-Apple pie: iresiphi ye-pie yase-American yakudala
Jamu kusuka kwamapheya ku-multivarquet: ujabulele ukunambitheka okumangalisayo!
Umbhishobhi Russian Church Dimitriy Rostovsky: Biography futhi amaqiniso okuphila
Yini Tshwaya yizinambuzane encephalitis? Okufanele ukwenze uma ulunywe?
Ezinjengenyanga Ukhonkolo for tank ukonakala: Ubukhulu nokufakwa
Izinto 100 ekuphileni ofuna uqinisekise!
Reanimation futhi labagula kakhulu
Indlela ukuhlobisa udonga ngezandla zabo ungqo
Aquarium linesizotha eyikati tarakatum